France oo si qarsoodi ah ciidamo ugu dirtay Liibiya & la dagaalanka Daacish | shumis.net
Home » ISIS » France oo si qarsoodi ah ciidamo ugu dirtay Liibiya & la dagaalanka Daacish
France oo si qarsoodi ah ciidamo ugu dirtay Liibiya & la dagaalanka Daacish
Ciidamada Kamandooska iyo Sirdoonka France ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin gudaha wadanka Liibiya si ay ulla dagaalamaan kooxda Daacish oo wadankaasi kusii fideysa.
Warkan ayaa waxaa Arbacadii shalay shaacisay Jariirada Le Monde ee kasoo baxda dalka Faransiiska oo wareysi la yeelatay saraakiil sare oo ka tirsan Wasaarada Difaaca ee wadankaasi.
“…Qorshaha Dowlada France waa in aan la shaacin ciidamada ka jooga Liibiya oo ay si qarsoodi ah u hawlgalaan…” ayuu yiri mid kamid ah Saraakiisha Wasaarada Difaaca Faransiiska oo jariirada wareysi siiyey.
Waxaana sidoo kale jariirada lagu soo bandhigay sawiro qarsoodi ah oo muujinaya ciidamada France ee ku sugan gudaha dalka Liibiya.
Wasaarada Difaaca ee France ayaa sheegtay inay baareyso saraakiisha xogtan qarsoodiga ah u gudbiyey Saxaafada.
Wadanka Liibiya ayuu hada ka socdaa dagaal xoogleh oo u dhaxeeya kooxaha hubeysan ee wadankaasi iyo Kooxda Daacish oo la wareegtay dhul badan oo ay ku jirto magaalada Sirte oo ah halkuu kasoo jeeday hogaamiyihii hore ee Col.Qadaafi.
Faransiiska oo hormuud u ah dalalka Midowga Yurub ee faraha kula jira arrimaha Afrika ayaa horey ciidamo u geystay wadamada NIGER iyo CHAD ee xaduuda laleh dalka Liibiya, ciidamadaasi oo hada la sheegay inay gudaha u galaan dalka Liibiya si ay xog uga soo aruuriyaan goobaha ay ku sugan yihiin Daacish.
Hay’ada sirdoonka France ee loo yaqaan DGSE ayaa la sheegay inay si toos ah u gacan siineyso maleeshiyaadka la dagaalamaya kooxda Daacish ee wadankaasi Liibiya.
Daacish ayaa Salaasadii laga saaray xaafado ay gacanta ku heysay ee magaalada labaad ee Benghazi. Balse kooxdan Xagjirka ah ayaa weli gacanta ku heysa in badan oo kamid ah goobaha laga soo saaro saliida wadankaasi.
Dhaq dhaqaaqa Daacish / ISIS oo bilihii lasoo dhaafay xooga saartay inay balaariso fariisimaha ay ku leedahay dalalka Yemen iyo Liibiya ayaa ah mid walaac weyn ku abuurtay dalalka reer Galbeedka oo horey ulla tacaalayey kooxdan hawlaha ay ka wado wadamada Ciraaq iyo Siiriya.
Title: France oo si qarsoodi ah ciidamo ugu dirtay Liibiya & la dagaalanka Daacish